17 Oct, 2014 - 00:10	 2014-10-16T17:47:35+00:00 2014-10-17T00:00:49+00:00 0 Views
KO makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 28 ekuberekwa ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora asi varume vevanhu kwete. Ndine mwana 1, nhamba dzangu 0771 416 732.
Kune vose vaimbofona pa0715 607 358 ngavachirega havo nekuti ndakamuwana wandaida.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndiri kutsvakawo musikana ari pachokwadi anoda zveimba. Afarira ngaandibate pa0717 055 468 asi call me back kwete.
Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana 1 ndinotsvaga murume ane makore 30 kusvika 37 wekuwanana naye ane mwana 1 kana 2, anoshanda. Anogara muHarare ngaandibate pa0771 234 223.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvaga musikana wemakore 18 kusvika 20 ekuberekwa ari pachokwadi. Ndine imba yangu muHarare, ndinonzi Panashe. Nhamba dzangu 0773 348 953.
Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvagawo mukadzi ane makore ari pasi peangu ane zvaanoita muhupenyu, anonamata. Anoda zvemba ari pachokwadi ngaandibate pa0739 293 983.
Ndiri mukomana wemakore 22 ekuberekwa ndiri kutsvaga musikana wekuroorana naye ane makore 18 kusvika 22. Andifarira ndibate pa0777 141 412.
Ndiri murume ane makore 27 ndiri kutsvagawo mukadzi anoda zvemba ari HIV negative. Anondida ngaafone pa0777 677 074 asi macall me back kwete.
Ndiri murume ane makore 40 ndiri kutsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 23 kusvika 30, mukobvu anoshanda. Ari pachokwadi ngaafone pa0772 815 730.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 38 ndiri kutsvaka mudzimai ane makore 25 kusvika 32 anoda zvemba chero ane mwana wake anonzwisisa. Ndinoshanda nhamba dzangu 0715 547 238.
Ndiri mukadzi ane makore 23 ndinodawo murume wekuroorwa naye ane makore 25-30. Ndiri HIV negative, vanoda ndibatei pa0783 617 321.
Ndiri murume wemakore 36 nemwana mumwe chete ndinodawo mudzimai ane makore 23 kusvika 28 chero ane mwana mumwe. Vanoda kutamba kana call me back kwete. Nhamba dzangu 0771 989 037.
Ndinonzi Loyd, ndine makore 26 uye ndiri kutsvagawo mudzimai wokugara naye ane makore 25 zvichidzika asina mwana. Asina chirwere ngaandibate pa0713 506 882.
Ndiri murume ane makore 36 handina mwana uye ndinodawo mukadzi ane makore ari pasi pe30 asina mwana. Fonai kana kutumira sms pa0778 266 943.
Ndiri mukadzi ane makore 32 ndiri kudawo murume ane makore 37 zvichikwidza kwete matsotsi. Nhamba dzangu 0717 209 675.
Chiregai kushambadza zvenyu nhamba dzangu dzinoti 0773 230 221 nekuti ndakazomuwana anondipa rudo rwakakwana.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 24 ndiri kutsvagawo musikana wekudanana naye ari negetive anondiwawo sezvandiri. Vanoda ndibatei pa0773 297 403.
Ndiri murume ane makore 47, ndiri HIV+ uye ndinoda mukadzi ane makore 34 kusvika 40. Ndine mwana mumwe chete, nhare dzangu idzi 0771 519 634.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvakawo musikana wekuroora. Nhamba dzangu idzi 0775 603 485.
Makadini veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 21, ndiri HIV negative uye ndinodawo mukomana ane makore 24 kusvika 28 anoshanda. Ndinogara kuDomboshava, vanoda nezvangu munofona pa0776 580 117.
Kune vose vaifona pa0783 564 471 chiregai henyu. Kutenda kunemi veKwayedza makaita basa ndakamuwana wandaida.
Ndiri mudzimai ane makore 29 ndinotsvaga murume anoda zvekuroora. Ndiri HIV positive, nhare dzangu idzi 0777 224 893.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana vaviri ndinodawo murume ari pachokwadi. Ndiri muHarare, vanoda ndibatei pa0775 732 257.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi ndiri kungosangana nematsotsi, ndiri mudzimai ane makore 34 nemwana mumwe chete uye ndiri pachirongwa. Ndiri kutsvagawo murume anoda zvekuroora, anoda ngaandibate pa0783 590 819.
Makadii? Ini ndiri murume ane makore 37 ndiri kutsvaga mukadzi wekuroora ane makore ari pakati pe26-34 asina chirwere. Vari pachokwadi ngavandibate pa0027 734 572 594, ndiri kuPretoria.
Ndiri kutsvaga murume ane makore 43 kusvika 46 ari pachokwadi asi matsotsi musafona. Nhamba dzangu 0714 302 627.
Makadii? Ndaneta kunyorera tsamba yangu isingapindurwi. Ndiri mudzimai ane makore 42 nevana 4. Ndakafirwa nemurume uye ndinotsvagawo murume ane rudo ane vana kunyanya akafirwa ane makore 45 kusvika 50. Ndapota matsotsi nevarume vevanhu kwete. Vanoda kunotorwa ropa ndivo vandinoda ndibatei pa0773 937 422.
Ndakamuwana wandaida makaita basa veKwayedza saka vose vaifona pa0778 770 605 chiregerai henyu.
Ndinotsvakawo mudzimai wekuroora chero ane mwana mumwe. Ini ndine makore 27, nhamba dzangu 0714 452 312.
Ini ndiri mudzimai ane makore 34 nevana 2, ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo murume ari positive seni. Ndakambonyorera ndikasangana nematsotsi, kunyanya emuHarare. Murume wemunhu kwete ndinodawo akafirwa seni. Ndinoita mabasa emawoko, nhamba dzangu idzi 0773 230 221, macall back kwete.
Ndiri mukadzi ane makore 45 ekuberekwa nevana ndiri kutsvagawo murume wekufambidzana naye ane makore 50 zvichienda mberi. Akatendeka ngaandibate pa0713 415 353.
Ndiri mukomana ane makore 25 okuberekwa ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi nekuvaka musha ane makore 18 kusvika 23. Ini ndinoshanda, nhare dzangu 0783 922 316.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 21 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika ava kunzwa kuda zvemba ari pachokwadi. Anoda anondibata paWhatsApp kana kufona pa0776 389 573 asi call me back ndaramba. Ndinozvishandira zvangu.
Kune vose vaifona panhamba dzangu dzinoti 0772 424 464 ngavachiregera havo nekuti ndakamuwana wandaida.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndiri kutsvaga musikana mutsvuku akanaka ane makore 18 – 21. Nhamba dzangu 0779 868 174.
Ndiri mukadzi ane makore 27 okuberekwa nemwana 1 ndinotsvagawo murume anoda kuroora ari pachokwadi. Ndibatei pa0717 137 591.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 23, HIV negative uye ndinotsvaka murume ane makore 28 – 34. Vane vakadzi kwete, nhamba dzangu 0739 378 371.
Ndiri mudzimai ane makore 29 ndinotsvaga murume anoda zvekuroora. Ndiri HIV negative, nhare dzangu idzi 0777 224 893.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 24 akatsvinda ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye. Anodawo andifarira ngaandibate pa0783 710 948.
Makadii veKwayedza? Ndinokumbirawo kuti mundishambadzewo. Ini ndinogara kuSouth Africa, ndiri murume ane makore 39 asina kumboroora. Ndinotsvakawo mukadzi ane makore 29-33 ari pachokwadi chekuda imba. Anondifarira ngaataure neni paWhatsApp kana kutumira sms pa+27 734 077 802.
Ndini Suzan Sibanda ndakazomuwana wokugara naye saka vose vaifona pa0772 113 937 chiregerai henyu.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 38 nemwana 1 ndinotsvaga murume ane makore 40 zvichikwira. Ndiri positive, nhamba dzangu 0712 384 861.
Ndiri murume ane makore 35 ndinobva kwaMurewa uye ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 28 zvichidzika, asina chirwere anonamata. Nhamba dzangu 0783 244 710.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 23, ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore anotangira pa18 kusvika 22. Ndinoda ari HIV negative. Ndiri kuita zvidzidzo zvehurairidzi paMarymount Teacher’s College kwaMutare. Ndinonzi Thomas, anoda nezvangu ngaafone pa0715 272 939.